Usoro nsị na - abụghị onye na - eku ume (COPD Therapy)
Otutu iku ume na enye otutu ihe ozo Sepray I usoro nwere otutu ume iku ume ： CPAP, S, T, na S / T, VAT na PC iji gboo ndi oria odi iche. Ọnọdụ S / T bụ maka ndị ọrịa COPD na nke abụọ iku ume iku ume, iji mee ka ahụmịhe iku ume dị mma na nke iku ume. Ọnọdụ VAT bụ maka ndị ọrịa nwere COPD, oke ibu hypoventilation syndrome na olu dịkwa ala. Ọnọdụ PC bụ maka ndị ọrịa nwere oke iku ume ngwa ngwa, olu dị ala na hypoxemia. Ogo mgbagha ahụ dị 4-30cm H2O. Nke ka elu pre…
OH-70C Nnukwu Naszọ Nasal Cannula Oxygen Therapy Device (HFNC)
- Teknụzụ nchịkwa akpaaka nke akpaaka O2 - Usoro ọgụgụ isi na iru mmiri ịchịkwa - Ruo ihe ndọtị dị elu 70L / min - airzọ nchekwa ikuku iji gbochie oria ọrịa Sepray OH-70C Sepray elu mmiri na-abụghị mkpali iku ume ngwo nke ihe eji eme ya. ntinye uche oxygen na iru ikuku ikuku oxygen na-agbakọta, usoro iku ume dị mma maka ndị ọrịa, Sepray OH-70C nwere ike imeziwanye ọkwa oxygen onye ọrịa, ma na-ejikwa operatio nkịtị ...
Usoro nsị ikuku na - abụghị nsogbu (Ihi ụra Apnea)
AST (Teknụzụ Mmekọrịta Akpaka) Soro iku ume onye ọrịa na-akpaghị aka, na-ekpebi oge ntụpọ nke onye ọrịa na onye nnọchi ya, ma nyekwa mgbali ume dị iche iche na iku ume ya; teknụzụ nke akpaka na-enweghị ike ịtọlite ​​uche, belata ọrụ iku ume onye ọrịa. Usoro teknụzụ ngụkọta oge akpaaka mepụtara usoro sayensị ọhụrụ, mezie nrụgide, na-achọpụta ma na-aza ụdị iku ume dị iche iche ...
BPAP A30 Auto-Level-ventilation na-abụghị ndị na-akpasu agha
Ngwaọrụ ụra maka onye na-ahụ maka ụra ihi ụra dị mma, iku ume dị mma, ezigbo ụra －Menyere ndị ọrịa ọrịa ụra. Ọ nwere mmetụta ọgwụgwọ dị ukwuu na snoring, ọgbụgbọ ụtụtụ, ụra ike ọgwụgwụ na mgbaàmà ndị ọzọ nke nsogbu ụra na-akpata. －BPAP A30 na-enye usoro ọgwụgwọ ụra dị mma ma dị irè maka ịmịpụ ma gbochie ndị ọrịa na-ehi ụra ụra. Nrụgide dị elu, Ike karịa ike bụ 4cmH2O-30cmH2O. －Sepray BPAP A30 dị mma maka…
BPAP 30 Igwe anaghị ekupụ ikuku
Ezigbo eku ume, ezigbo ụra sleepMenyere ndị ọrịa ọrịa ụra. Ọ nwere mmetụta ọgwụgwọ dị ukwuu na snoring, ọgbụgbọ ụtụtụ, ụra ike ọgwụgwụ na mgbaàmà ndị ọzọ nke nsogbu ụra na-akpata. －BPAP 30 na-enye usoro ọgwụgwọ ụra dị mma ma dị irè maka ịmị mkpụrụ na mgbochi ndị ọrịa na-egbochi ụra. BPAP 30 nwere ike rụọ ọrụ nrịanrịa ndị a nke ọma: Ize ume, Afọ na-eku ume, Insomnia, Ntinye ụra abalị, ụra abalị, ebe nchekwa ebe nchekwa ...
Igwe nkwụpu ikuku nke ikuku CPAP 25
Ezigbo eku ume, ezigbo ụra sleepMenyere ndị ọrịa ọrịa ụra. Ọ nwere mmetụta ọgwụgwọ dị ukwuu na snoring, ọgbụgbọ ụtụtụ, ụra ike ọgwụgwụ na mgbaàmà ndị ọzọ nke nsogbu ụra na-akpata. －BPAP 30 na-enye usoro ọgwụgwọ ụra dị mma ma dị irè maka ịmị mkpụrụ na mgbochi ndị ọrịa na-egbochi ụra. CPAP 25 nwere ike rụọ ọrụ nrịanrịa a nke ọma: Ize ume, Afọ na-eku ume, Insomnia, fhụjuanya abalị, ụra abalị, ụbụrụ ebe nchekwa ...
Igwe anaghị ekupụ ikuku na CPAP A25 Auto CPAP
Igwe anaghị eku ume ikuku ST-30F
Ọmụmụ ihe ọmụmụ gbasara ọgwụ na-egosi na ndị ọrịa COPD nwere ọgwụgwọ ventilashị na-abụghị ikuku na ụlọ nwere ike ịbawanye nke ọma
ihe mgbaàmà hypoxia na njigide carbon dioxide, Sepray ST-30F na-enye usoro zuru oke maka iku ume.
ndị ọrịa ezughi oke.
Igwe anaghị ekupụ ikuku nke ST-30D
－ Gradedị ọkwa edMedical －Higher pressure －Ọ dị oke ọnụ karịa ndị ọkachamara ， Ọmụmụ nyocha ，lọ nyocha zuru oke na-egosi ndị ọrịa COPD nwere ọgwụgwọ Bi-larịị na-enweghị mmerụ ahụ n'ụlọ nwere ike melite mgbaama hypoxia na njigide carbon dioxide, Sepray ST-30D na-enye. usoro zuru oke maka ndị ọrịa enweghi ike iku ume. Seresere ST-30D na-emetụta ndị na-eso n'ọtụtụ ọgwụgwọ na nlekọta disease COPD, Ọrịa Neuromuscular ， Pulmonary fibrosis, ...
Nrụpụta ikuku Ventilation na-adịghị emerụ ahụ －Mapụta nsonaazụ ikuku oxygen －Premium teknụzụ akpaka, njikwu igwe mmadụ 1. Igwe ngbanwe ọkụ na –emepụta teknụzụ urednweta Ekwentị (VAT) na-akpaghị aka na-eche nrụgide kwesịrị ịba uru olu ziri ezi dabere na mgbanwe nke onye ọrịa ma na-enye IPAP na-abawanye. na EPAP. Ngalaba etinyere: ICU, depi respirat. Mwepu ọnọdụ mberede Neurosurgery dept. Geriatrics dept.Cardiolology dept. Ọ dị mfe iji －Batte ...